नेताजी, जनसमुदाय भनि बिल्कुलै सम्बोधन नगर्नुस, किन झुक्याउनु हुन्छ ?) - Jagaran Post
नेताजी, जनसमुदाय भनि बिल्कुलै सम्बोधन नगर्नुस, किन झुक्याउनु हुन्छ ?)
जागरणपोस्ट २९ माघ २०७७, बिहीबार १५:१४
तपाइँहरुका जनसभा वास्तवमा कार्यकर्ता सभा हो । जुन वडा समिति देखि गाउँ, इलाका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्र सम्म मिसिएको स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिक सभा हो । त्यसैमा मिसिएका हुन्छ, तपाइकै पार्टी निकट बिभिन्न खाले पेशागत ब्यवसायिक कमिटीहरु । कोही सामान्य समर्थकहरु पनि आएका होलान् त केही रमिते समेत १ तिनीहरु पनि आएका होलान् जो सितैमा मासुभात खान र घुम्ने प्रलोभनमा परे वा ल्याइएका पनि हुन सक्छन् पैसा नै दिएर (खास गरि पेशेवर गुण्डाहरु) । कोही त यही मौकामा शहरमा अड्किएको काम फत्ते गरौ भनी आएका हुन सक्छन् । गाउँका अधिकांश सिधासादाहरु त के गर्न आएका भन्ने पनि थाह नभै तपाइका चलाख कार्यकर्ताहरुले लटपटी परेरै ल्याएका होलान् । अनि कत्तिको त हिड्ने बाटो र सडकका ब्यवसाय नै खोस्दिनु भएको छ त, बिचरा उनीहरु पनि रमिते बन्ने नै भए । माफ गर्नुहोला यी शहरमा तपाइका नितान्त स्वार्थ केन्द्रित भाषण सुन्ने रहर कति पनि छैन, आम नागरिकलाई !
तपाईहरुलाई प्रष्ट थाहै छ कि, जनसागर भन्दै भिड कसरी जम्मा गर्न सकिन्छ । सदियौ देखि जानेकै पनि यति त हो नेपालीजनलाई गरीवरश्रमीक कै दर्जामा राख्दै आएकै यसैका लागि होइन र ? शब्दमा बिकास ओकेल्यो ! कागजमा बिकासका भाषाले पोत्यो !! यथार्थमा नियमित टालटुल गर्‍यो अनि एकाध ठाउँमा छारो हाल्यो, गर्‍या झै देखाउन । वस सोझासिधा लुटपुटायो र आफू अनि आफ्ना जतिलाई सके जति उकास्यो, चौतर्फी रुपमा ( धन,काम,माम, शिक्षा, ठेक्का । आदि माध्यमबाट । बिचरा सर्वसाधारणका छोराछोरीहरुलाई बुर्जुवा शिक्षा नलिउ भन्यो र उता आफ्नालाई भने उनै साम्राज्यवादी भनी धारेहात लाउने गरेका देशकै भुमिमा अब्बल शिक्षा दिलाई राम्रो अंकमा पास भएकोमा वा उच्च तहको पद सम्हालेका नाममा पेसबुक पेज रङ्गायो १ आफू पक्षीय वकिल, डाक्टर, निर्माण ब्यवसायी, बिद्यार्थी लगायत पेशागत संङ्गठन खडा गर्‍यो र तिनलाई तदनुरुपको कार्यमा उपभोग गर्‍यो ।
तपाइ नेताजीहरु त लडाउन पनि माहिर नै हुनुहुन्छ नि है । धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय, भुगोल, वर्ण आदीका नाममा । बिचरा हामी छिमेकी अनि नातागोता र साथीभाइ पनि भन्न पाउन्नौ । शत्रुता र कटुता टोलटोल देखि गाउँ शहर सबैतिर खडा गर्दै स्थायी शत्रुमा परिणत गरि दिनुहुन्छ । अनि आफुहरु भने राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुदैन भन्दै आफैले थुकेको थुक समेत नीजि स्वार्थका लागि चाटन तयार भै वस्नुहुन्छ !
यी र यस्तै तमाम नौटङकी हामी जस्ता सर्वसाधारणलाई थाह नभा कहाँ हो र रु आशा एवं वाध्यतामा पिल्सिएको मात्रै हो १ हिजो म बाल्यकाल छदा पन्चायत थियो । त्यहाँ हैकम चल्थ्यो, बोल्न कम पाइन्थ्यो तर बिस्कुन सहरका बेथितीरबिसंङ्गती यत्रतत्र सवत्र थिएन । बहुदलकाल देखि गणतन्त्र सम्मको यात्रामा बोल्न मात्रै त के जथाभावी ओकेल्न पनि पाइयो तर बाकी सप्पै उल्टो गतिमा चल्न थाल्यो । बोलेर, ओकलेर, खोकेर, काचोवायु थोपरेररलादेर मात्रै हुदो रहेनछ त नेताजी । गफैले मात्र चिउरा भिज्दो रहनेछ । चिउरा भिजाउन त दही चाहिन्छ तर तपाईहरु त पानी पनि दिन तयार हुनुहुन्न । थुकले भिजा र घिच झै को व्यवहार गर्नुहुन्छ १ र तपाइहरुलाई त्यही नै प्रिय लाग्छ, किनकी आमरुपमा नागरिक समृद्धि जाग्यो र चेतना पलायो भने त यथास्थितिमा तपाईं जस्ता नेताको खैरियत नै हुदैन । कि त भड्खालोमा जाक्दिन्छ्न कि भने एक सय असी डिग्रीको कोणमा अर्थात आनकोतान सुध्रन बाध्य पार्दिन्छ्न । जुन तपाइहरुको भित्री चाह नै होइन !
यत्तिका पोल खुल्ने कुरा त तपाइ नेताजीहरुले सुन्नै सक्नुहुन्न । वाइह्यात लाग्छ र कुनै एक बादी वा तन्त्रको बिल्ला भिराइ दिनु हुन्छ । भरसक्य प्रतिगामी, परिवर्तन बिरोधी, सामन्ती वा कुन्नी के वादी लगायत के भन्दा आफ्ना पक्षका कार्यकर्ताको पारो तात्छ, त्यही बकिदिनु हुन्छ । अनि त कुरोको चुरो नबुझी अरिङ्गाल, बिच्छी, बारुला रुपी कार्यकर्ता एवं स्वार्थपुर्ण झुण्डहरुले चिल्न शुरु गर्छ्न । अनि यसरी बोल्न पाइने भनि खुबै खोक्ने गरेको गणतन्त्रमा समेत वाक्कदिक्क्क, बाध्य बनाइ मुख थुनिन्छ ।
तैपनी हाम्रा नेताजीहरु दिनहुँ झै कुर्लन्छ्न कि हामी परिवर्तनकारी, गणतन्त्र पक्षधर, धर्मनिरपेक्षी, समाबेशीरसमानुपातिक, सार्वभौम जनताका सेवक, आदि-आदि ।
तपाईका समावेशीरसमानुपातिक कस्को लागि फलिफाप भो रु नागरिकले देखेकै हुन् । धर्मनिरपेक्षताले अधार्मिक चलखेल अनि बिखण्डन कत्तिको निम्तेको छ वा अझ भनौ भुसको आगो झै फैलेको छ, त्यो सबैले आम रुपमा महशुस गरेकै हुन । तपाईं नेताजीहरु त बहुरुपिया हुनुहुन्छ । कहिले पादरीका सर्वतपान गर्नुहुन्छ त कहिले बोकाको वली दिने देखि भैंसी पुजा सम्म गर्न पछि पर्नु हुन्न १ किनकी तपाइहरुलाई फाइदा चाहिएको छ, कमाउन परेको छ अनि भोट र सत्ता प्राप्तीका लागि आफ्ना आस्था र बिश्वासहरु साट्नु हुन्छ । यहाँहरुको नाटक एवं कपटपूर्ण व्यवहार देख्दा त तपाइहरु सँग पनि के आस्था अनि भावना होला र रु झै लाग्छ । तर पनि नेताजी आज सम्म एक बिषय अर्थात् नकारात्मक निकास र बिकासमा भने पि.एच.डी. नै गर्नु भो । कस्तो नकारात्मकता भने झुट, फुट, लुट, गुट, लडाइ, झगडा, बिभाजन, बेमेल, बैमनष्यता, कटुता, गालीगलौज, अकर्मण्यता, निरहीपन, हेपाहा, उदासीन, नाटकमन्चन, गोहीको आसु, बनावटी मेल, स्वार्थपूर्तिका मिलन ।।। मार्फत आफू र आफ्ना भने निर्धक्क, कुस्त, मस्त पार्न सक्नु भो ! जयहोस यहाँको !! (जयहोस भन्नु त मेरो स्वभाव हो) ।
हुने हुनामी मेरो हातमा छैन हजुर । यहाँको नियती, अनुहारका छट्पटी, मनको अशान्तीले नै देखाइरहेका छ्न, नतिजाहरु । जाबो आफ्नै शरीर अनि मन त नियन्त्रण गर्न नसक्नेले संसार बिजय गर्छु र छक्याउछु भनी कसरी ठान्न र मान्न सक्नु हुन्छ हँरु काल कति खेर, अनि कस्तो क्रुरताका साथ देखा पर्छ भन्ने जान्न नसक्ने तपाईं हामी जस्ता मनुवाले अब बाकी जीवनका लागि धेरै फुर्ती नलाकै वेस ।
सक्नु हुन्छ बदलिनुस । राम्रो गर्ने प्रयत्न गर्नुस १ नसके चुप्प लागि सन्यास लिनुस र जीवन अनि जगतका वारेमा घोत्लिनुस । के था हाल सम्म गरेका तमाम पाप अनि पाखण्ड पखाल्ने बाटो पो खुल्छ कि रु नत्र तपाइले थुपारेका भनिएका सान र सकौत अनि अकुत धनले तपाइलाई नै जीवनको अन्तिम क्षण तिर भत्भती पोल्न थाल्नेछ्न । नभए पनि तपाइका सन्तान दर सन्तानलाई त्यही धन र सकौतले रसातलमा पुर्‍याउने छ, एक दिन । किनकी बिना पेशा र कर्मका तपाईं नेताजीहरुको कमाइमा शुद्धता कदापी छैन नै । अशुद्ध र वासी खानेको स्वास्थ्यमा गडबडी आए झै अशुद्ध धन र बिकृत कर्मले तपाइहरुको मनपेट पोल्ने नै छ एकदिन । र सायद त्यो दिन वा क्षण नै तपाइको अन्तिम क्षण हुनेछ । र त्यस बेला पश्चाताप अनि अतृप्त आत्मा लिएर तपाइको जीवनको गति बन्द हुनेछ ।
त्यसैले बिनम्र आग्रह छ, सच्चिनुस, अझै बेला छ । सक्नुहुन्छ, राम्रो गर्नुस । भलो सोच्नुस । उपाय लागेन, राजनीतिलाई सक्ने पुस्तामा सुम्पन भुमिका खेल्नुस र आफ्नै जीवनको मति र गति सुधार्न तर्फ केन्द्रित रहनुस । तर थप नबिगार्नुस है ! तपाइहरु जस्तै एक नेता (प्रश्रीत ज्यु) आजकल यतैकतै पिपलको बोटमुनी ध्यानस्त हुने गरेको देखेको छु, मैले ।
वस, नेताजी सुध्रेको हर्न मन छ । तन्त्र, वाद, सत्तामा को म जस्ता धेरै नागरिकलाई मतलव नै छैन । देश समृद्ध भएको अनि नागरिकका दैनिकी खुशी एवं परिश्रममा बितेको हेर्न मन छ ।
सदा जयहोस ! सबैको जयहोस !!